काठमाडौँ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनका लागि आज राति १२ बजेदेखि मौन अवधि शुरु हुँदैछ ।
सो पदका लागि वाम गठबन्धनको समर्थनमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र नेपाली काँग्रेसका कुमारी लक्ष्मी राईले उम्मेदवारी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाका सदस्य रहेको निर्वाचक मण्डलले सो पदमा मतदान गर्नेछ । आयोगले आज सो निर्वाचनको सञ्चालन र व्यवस्थापनका लागि मतदान अधिकृत र सम्बन्धित कर्मचारीलाई तालीम दिएको छ ।
प्रकाशित : शनिबार, फागुन २६, २०७४१८:२३
एमाले–माओवादी संसदीय दलको संयुक्त बैठक भोलि बस्दै!
‘एउटा निहुँझिकेर दुईजना सांसद ठिंग उभिंदैमा संसदका सबै गतिविधि अवरुद्ध हुनेहुनु हुँदैन’- ओली
नयाँ शक्ति पार्टीलार्इ कसैसँग तुलना गर्न मिल्दैन : डा. भट्टरार्इ (भिडियाे अन्तर्वार्ता)
किन गएनन् ओली चियापानमा ? चियापानमा बहिस्कारको पर्चा पनि भेटियो, कसले छर्यो पर्चा ?
काँग्रेस बैठक अाजबाट पुनः सुरू